Kansarka carruurta ku dhaca - Somali Kidshealth
Kansarka carruurta ku dhaca
04/08/2013 10/08/2013 by admin
Kansarku wuxuu ka bilaabmaa unugyada jirka oo ah aasaaska nolosha binu-aadamiga. Jirka aadamigu wuxuu u baahan in la sameeyo unugyo cusub marka baahi timaado. Unugyada jirka aadamiga waxay ka kooban yihiin bilaayiin iyo bilaayiin unug oo leh cimri qiyaastii afar billood ah. Unug kasta marka uu gaboobo waa la badalaa oo waxaa la sameeyaa unug cusub.
Mararka qaarkood habka samaynta unugyada cusub ayaa qaldama oo waxaa la sameeyaa unugyo aan loo baahnayn ama unugyadii gaboobay oo ay ahayd in la badalo ayaa tagi waaya. Unugyada kansarka waxay caan ku yihiin inay u samaysmaan si qaabdaran oo xadka ka baxsan, waxay leeyihiin xajmi ka duwan kuwa caadiga, waxay baabi’iyaan oo ku fidaan unugyada fiyoow ee dariska la ah.
Marka ay sii bataan unugyada kansarku waxay cunaan in badan oo nafaqadii jirka ah, waxay wiiqaan awooda iyo xoogga jirka uu isaga difaaci lahaa cudurada. Unugyadii kansarka ee saa’idka ahaa waxay sameeyaan buro ama kansar baaqi ku ah jirka oo si khalad ah u sii kora.
Burooyinkii ka samaysmay unugyadii sida qaldan u abuurmay waxay noqdaan labo midkood oo kala ah nooc buro ah oo meesha ay joogyo ku xaddidanta oo la yiraahdo Benign Tumour iyo nooc unugyo kansar ah oo la yiraahdo Malignant tumour kuna fida nudayaasha u dhaw ilaa ay unugyada kansarku gaaraan jirka oo dhan.
Caalami ahaan waxaa la qiyaasaa sanadkii dunida in carruur dhan 175,000 ay qaadaan kansarka carruurta ku dhaca, halka ay u geeriyoodaan kansarka 96,000 carruur ah sannadkii. Maadaama oo aysan jirin tirokoob cudurada ah oo rasmi ah, haddana Soomaaliya kama marna carruurta u dhimata kansarka.
Carruurtu way qaadi karaan kansarka sida dadka waawayn, wuxuuna kaga dhici karaa dhamaan qaybaha jirka, laakiin waxaa jira faraq u dhexeeya kansarka carruurta iyo kan dadka waawayn. Kansarka carruurtu degdeg buu u dhici karaan isagoon iska soo hormarin calaamado hore, nasiibwanaagse wuxuu leeyahay fursad sare oo daawayn ah.
Noocyada kansarka carruurta ku dhaca.
Leukemias: Waa nooc kansar ah oo ilmaha kaga dhaca habdhiska dhiigga iyo Dhuuxa lafaha oo ah halka lagu sameeyo unugyada cas cas ee dhiigga. Leukemia waa nooca kansar ee ugu badan ee carruurta ku dhaca, Calaamadaha lagu garto waxaa ka mid ah kala-goysyada iyo lafa xannuun, miisaanka oo dhinma, daal iyo tabardaro iyo calaamado kale.
Brain tumors: Noocani wuxuu ku dhacaa habdhiska dareensidka gaar ahaan maskaxda oo ay ka soo baxdo buro-kansareed. Noocani waa nooca labaad ee ugu badan ee ku dhaca carruurta. Calaamadaha burooyinka maskaxdu keenaan waxaa ka mid ah madax-xannuun, wareer, lallabo, matag, aragtida oo cawl galo iyo dheelitirka socodka oo dhuma.
Lymphomas: Noocan kansarka ahi wuxuu asiibaa habdhiska liimfaha oo ah habdhis qanjiro ah oo ka qaybqaata difaaca jirka sida qanjirada qumanka iyo thymus. Labada nooc ee ugu caansan laymphoma waxay kala yihiin Hodgkin disease oo inta badan ku dhaca luqunta qanjirada ku yaal iyo Non-hodgkin disease. Calaamadaha ay la yimaadaan lymphoma waxay kala yihiin qandho, ilmaha oo caatooba, dhidid badan, daal, iyo qanjirada luqunta, kilkisha iyo saracda oo barara.
Daawaynta kansarka carruurta ku dhaca waxay isagu jiri kartaa daawayn kiimikaad(chemotherapy) oo ah in ilmaha la siiyo daawo afka laga qaadanayo ama duritaan oo lagu dilayo unugyadii kansarka. Gubitaanka(radiation) oo ah in unugyadii kansarka lagu gubo falaaro ilays ah oo diliya unugyadii kansarka. Sidoo kale waxaa lagu daawayn karaa kansarka in qalliin lagu sameeyo jirka si unugyada kansarka meesha ay jirka kaga yaalaan looga saaro.
Daawaynta kansarku waxay ku xiran tahay hadba meesha ay unugyada kansarku ku yaalaan iyo xaddiga fiditaan ee uu sameeyay kansarku.
Tagged burooyin, carruurta, kansarka, leukemia
PrevHal sanno jir
nextMadaxwaynaadka ama Hydrocephalus